DAAWO: Madaxweynaha Puntland oo si adag uga hadlay Arrimaha kasocda gudaha Mandiqada.
July 20, 2019 NEWS 1
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo kahadlayay magaalada Garoowe ee caasumada maamulkaas, ayaa markii ugu horeysay si furan uga hadlay arrimaha maalmihii u dambeeyey soo baxayey ee kuwajahan dhalinyaro u hanqal-taagaya dhinaca dawladda faderaalka ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in horumarka iyo Ammaanka lagu gaaray dawladnimada Puntland, isagoo sheegay in dhalinyaradda looga baahan yahay in ay garowsadaan marxaladihii lasoo maaray iyo waxa lagu helay nidaamka.
Shalay ayay ahayd markii Odayaasha gobalka Barri ay aad uga caroodeen xariga qaar kamid ah waxgaradka gobalkaas oo ay xirtay Puntland, ka dib markii ay qaadeen lacag ay dawladda Soomaaliya ugu talo-gashay dhismaha wadada laamiga ah ee magaalada Boosaso, ayna horey u balan qaaday.
Mr, Deni ayaa sidas oo kale sheegay in ay Ayaandarro tahay in dad u dhashay Puntland loo adeegsado duminta Puntland, isagoo ula jeeday dabcan qaar kamid ah dadkii asaasay Puntland oo taageersan dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Hadalka, Madaxweynaha Puntland ka jeediyey kulan ka dhacay Garoowe, ayuu sidaas oo kale ku soo qaatay qoraal ay shalay soo saartay Madaxtooyadiisa oo ku wajahnaa arrimaha Somaliland iyo Dawladda Soomaaliya.
MAXAY ISKU HAYAAN PL & DF SOOMAALIYA
Isagoo sheegay in ay doonayaan in ay qeyb ka ahaadaan wada hadaladas, maadaama Somaliland & Puntland ay isku hayaan gobalada Sanaag & Sool, wuxuuna sheegay in wax kasta loo baahan yahay in laga hormariyo cidda ay taabanayaan.